Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Junzō Okudaira
14-kii Abriil, 1988, gaari bam siday ayaa ku hore qarxay Naadiga USO (USO Club) ee ku yiil, Naples, Italy. Waxaa qaraxa ku dhinteen shan qofood, oo ay ku jirtay haweeney ka tirsanayd shaqaalaha ciidanka Mareykanka, waxaana ku dhaawacmeen 15 qofood, oo afar ay ahaayeen shaqaalaha ciidanka Mareykanka. Junzo Okudaira, oo ka tirsanaa kooxda argagixisada Ciidanka Cas ee Jabaan (Japanese Red Army – JRA), waxaa lagu xukumay dalka Mareykanka markii ay taariikhdu ahayd 9-kii Abriil, 1993 iyadoo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay qaraxii bamka ee ka dhacay magaalada Naples. Okudaira waxaa kaloo lagu tuhmayey in uu ku lug lahaa qarax baabuur iyo madfac lagu weerary Safaaradda Mareykanka ee magaalada Rome.
Waxaa JRA la aasaasay 1970-yadii kaddib markii ay ka go’een Ururka Shuuciga ah ee Jabaan-Xisbiga Ciidanka Cas. Markii ay marayeen heerkii ugu sarreeyay, waxaa uu ururka ka koobnaa in ka badan 40 xubnood waxaana loo tixgelin jiray in uu ka tirsan yahay kooxaha hubeysan ee garabka bidix ee caalamka ugu fiican. Sanooyinkii 1970-yaddii, JRA waxay dhowr weerar ayeey caalamka ka fuliyeen, oo ay ka mid ahayd xasuuqii Gegida Dayuuradaha Lod ee dalka Israel, afduub lagu sameeyay laba dayuuradaha Jabaaneeska ah, iyo isku day lagu qabsanayo Safaaradda Mareykanka ee Kuala Lumpur.
Ujeeddada JRA waxay ahayd in la afgambiyo Dawladda Jabaan iyo boqortooyada; hase ahaatee, hoggaamiyaha kooxda ayaa la xiray sanadkii 2000 iyadoo sanadkii xigay ay kooxda ku dhawaaqeen qorshihii lagu kala diray. Xiriirkii uu ururka hore ula lahaa kooxadaha argagixisada ee Falastiinta ayaa keenay in dadka badankiisu ay aaminaan in qaab dhismeedka awoodda JRA ay u wareegeen Bariga Dhexe.